Xildhibaano iyo Siyaasiyiin kaso horjeestay hadalkii kaso baxay QM, IGAD iyo IGAD
May 2, 2012 Markacadeey
Xildhibaano iyo siyaasiyiin ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si cad ugu soo horjeesteen hadalkii kasoo baxay QM, Midowga Afrika iyo Urur goboleedka IGAD kaasi oo ku addanaa inay jiraan dad caqabad ku ah arrimaha Roadmap-ka iyo Dastuurka loo sameynayo dalka Soomaaliya.
Xildhibaanad Caasha Axmed Cabdalla oo ka mid ah barlamanka oo ka jawabay hadalkaasi aya waxa ay sheegtay in QM, IGAD iyo Midowga afrika aysan nabad u rabin Soomaliya, iyadoo tilmaamay inay doonayaan in dalka Soomaaliya uu ku jiro colaad iyo burbur.
Caasha Axmed ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya marna aysan gali doonin gumeysi cusub oo ay galiyaan dowladaha aan dooneyn Maslaxadda Soomaailya, iyadoo xustay in shacabka Soomaaliyeed ay kasoo horjedaan dhibaatooyinka lala doonayo Soomaaliya sida ay hadalka u dhigatay.
Sidoo kale Xildhibaan C/fitaax Ibraahim Rashiid oo isna ka mid ah barlamanka ayaa waxa uu sheegay in Roadmap-ka iyo Dastuurka aan la horkeenin barlamanka, islamarkaana barlamanka uu xaq u leeyahay in uu ansixiyo ama uu kasoo horjeesto sharciyada la horkeeno barlamanka.
Siyaasiga Max’ud Cumar Afeey ayaa waxa uu isna dhankiisa wax lala yaabo ku tilmaamay Dastuur ay wataan dad dano gaar ah ka leh Soomaaliya, wuxuuna ugu baaqay shacabka inay ka tashtaan Aayahoodu oo aysan marna ansixin Dastuurka lagu qaldayo. HOME